Iindaba - Uyikhetha njani i-grinder ye-pepper kwimisebenzi?
Zininzi umahluko kwimisebenzi ye-grinder ye-pepper, sazisa amanqaku ambalwa aqhelekileyo okuhlalutya indlela yokukhetha kwimisebenzi.
1. Ukukhethwa kwezinto eziphambili
Xa uthenga into yokusila ipepile, eyona nto ibalulekileyo zizinto zemveliso. Okwangoku, izinto eziqhelekileyo zenziwe nge-iron, i-stainless steel kunye ne ceramic.
Ukuba ufuna ukuyisebenzisa ekhitshini eshushu kwaye enomswakama, intsimbi engenasici ekungelula ukuyirusa lukhetho olufanelekileyo, kwaye inokusetyenziselwa ukugaya ityuwa yerwala. Nangona kunjalo, i-stainless steel ithambile kunezinye izinyithi kwaye iyathanda ukunxiba emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Isinyithi sokuphosa sisinyithi esomeleleyo kakhulu, kwaye nokuba kunzima nangakumbi kunye neepepercorns ezinkulu kunokuba ngumhlaba ngokuthembekileyo nangokukhawuleza. Nangona kunjalo, into engalunganga kukuba kulula ukurusa, kufuneka igcinwe kude kufume, kwaye ayinakusetyenziselwa ukugaya ityuwa yerwala.
I-Ceramic yinto eyomeleleyo, ukongeza kokungarusi, inokusila netyuwa. Ukongeza, ivumba leepepile lilahleka ngokulula ngenxa yobushushu obuveliswe ngexesha lokusila, kodwa izinto zeceramic azithambekele ekuveliseni ubushushu bokukhuhlana, ukuze ikwazi ukugcina isongo sepepile.
2. Uhlobo oluguqula ubukhulu bokugaya lusebenza ngakumbi
Ukuba ufuna ukwandisa ukusebenza kwe-grinder ye-pepper, unokuba unqwenela ukujonga ukuba imveliso inomsebenzi owongezelelweyo wokulungisa ubukhulu bokugaya. Xa kutyiwa etafileni, sihlala sisebenzisa ipepile erhabaxa ukongeza incasa; kodwa ukuba isetyenziselwa ukupheka, sisenokufuna iinkozo zepepile ezilinganayo. Unokukhetha ngokweemfuno zakho zobuqu.
3. Isitayile esinokutsalwa, esingarusi kulula ukusicoca
Uhlobo lwesibini lokujija ipepile lunokudityaniswa kwaye lucocwe lula ngenxa yolwakhiwo lwangaphakathi olulula, kodwa uninzi lwezinye iimveliso azinakudityaniswa, nto leyo eyonyusa kakhulu ubunzima bokucoca kunye nolondolozo. Nokuba kuyimodeli enokuthi ichithwe, ukuthintela ukufuma okushiyekileyo emva kokucoca kunye nokwenza umhlwa, kuyacetyiswa ukuba usebenzise ilaphu elomileyo elicocekileyo ukusula endaweni yokuhlanjwa ngamanzi acocekileyo.
Nangona kunjalo, ukupheka kuya kubangela ukuba umsi weoyile kunye neoyile ecekeceke, kwaye kunzima ukuyicoca ngokucoca kuphela. Ngeli xesha, kuyacetyiswa ukuba uthenge isitayile esenziwe ngeglasi okanye ngezinto ze-acrylic. Ukongeza, i-ceramic blades ayithambekele kakhulu kurusi kunensimbi engenasici. Ezi zinto zinokucocwa ngokulula.
4. Uhlobo olukwaziyo ukubona amandla ashiyekileyo krwaqu kufanelekile kubantu abalusebenzisa rhoqo
Xa upheka, kuya kufuneka ukuba ukhe waqubisana namava okuchola ibhotile yesinongo, kodwa wafumanisa ukuba ibhotile sele ingenanto. Ngaba kunzima kakhulu? Ngokukodwa izitya ezifuna ukucoca ngokukhawuleza, ukuba kufuneka uyeke ukongeza isinongo ngexesha lokupheka, inokuchaphazela incasa yezitya ezigqityiweyo. Ke ngoko, nangona isixhobo sokugaya ipepile somthi sikhangeleka sidala kwaye sithandeka, ukuba uyisebenzisa rhoqo, kuyacetyiswa ukuba uthenge iimveliso ezenziwe ngezinto ezibonakalayo njengeglasi okanye i-acrylic, ukuze ubone amandla aseleyo ngokuwakrwaqula!
Iindidi ezahlukeneyo zokugaya ipepile zinezibonelelo ezahlukeneyo kunye nezinto ezingalunganga. Kuyacetyiswa ukuba ubhekise kumanqaku ekwabelwana ngawo namhlanje ngaphambi kokuthenga, kwaye ukhethe olona hlobo lufanelekileyo ngokweemfuno zakho!